Ihuenyo na ihe omimi, azụmahịa ụbọchị maka Mac | Esi m mac
Ihuenyo nzuzo na ihe omimi, azụmahịa ụbọchị maka Mac gị
Anyị malitere otu izu ọhụrụ n’ime Esi m mac na, ọ bụ ezie na ọ na-anwa oge dị mkpirikpi karịa ka ọ na-adịkarị maka ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ anyị, anyị agaghị akwụsị inye gị ụfọdụ nke kacha mma azụmahịa na egwuregwu na ngwa maka Mac, yana ozi kachasị oke egwu ugbu a na-egosi Apple.
Taa, anyị ewetara gị ngwa abụọ: ịba uru na egwuregwu, yabụ enwere ihe maka mmadụ niile. Mee ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji uru ego ọ bụla, ọ bụrụ n’azụ oge, echegbula onwe anyị, anyị ga-alaghachi echi site na ịnyekwu onyinye.
1 ScreenSaver Malite
2 Ihe omimi nke Portal Crystal
Ma ị na-eji nyocha ihuenyo ma ọ bụ ọrụ ihuenyo na Mac gị, ma ọ bụ na ọ bụghị, ejiri m n'aka na ị ga-ahụ ezigbo uru maka ngwa "ScreenSaver Start", yana karịa karịa ugbu a na ị nwere ike nweta ya n'efu maka obere oge .
con ScreenSaver Malite ị ga-enwe akara ngosi na nchịkọta nhọrọ nke ga-enye gị ohere ngwa ngwa ẹkedori gị Mac si screensaver site na a keyboard shortcut. Ma ọ bụrụ na ị hazie ya ka ọ bido mgbe ịmalitere kọmputa gị, ị ga-adị njikere maka ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịgbachi ihuenyo ahụ ngwa ngwa (ọbụlagodi mgbe ịnweghị ọrụ ihuenyo na-arụ ọrụ na Mac gị) na-egbochi nzuzo ọnọdụ ị na-emeso ka anya gị na-ahụ ya.
ScreenSaver Start nwere a mgbe price nke 1,09 euro Otú ọ dị ugbu a, ma ọ bụrụ na ị na-eme ọsọ ọsọ, ị nwere ike nweta ya maka free.
Ihe omimi nke Portal Crystal
Na ịmalite izu na ụkwụ aka nri, ọ dịghị ihe dị mma karịa iji egwuregwu na-eme ya. N'okwu a ọ bụ "The Mystery nke Portal Crystal", a ihe omimi na egwuregwu di egwu na ihuenyo zuru oke nke ị ga - eso Nicole, bụ onye na - enyocha nnabata nna ya dị omimi mgbe ọ chọtara nchọpụta nke nwere ike "ịgbanwe ndụ mmadụ."
"The Mystery nke Crystal Portal" nwere ọnụahịa oge niile nke euro 5,49, agbanyeghị ugbu a ị nwere ike nweta ya maka naanị 1,09 €
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ihuenyo nzuzo na ihe omimi, azụmahịa ụbọchị maka Mac gị
Tim Cook zutere Macron na France taa
Kọfị Lake ibe nwere ike ịbụ nhọrọ Apple maka iMac ọzọ